“Waan ku farxay guushii 6-0 ahayd ee Chelsea, balse…” – Guardiola – Gool FM
“Waan ku farxay guushii 6-0 ahayd ee Chelsea, balse…” – Guardiola
(Manchester) 23 Feb 2019.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay kulankii ay guusha 6-0 kaga badiyeen Chelsea todobaadyo ka hor, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kahor kulanka Axada ee finalka Carabao cup ay ku wada ciyaarayaan labada kooxood.
Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Chelsea iyo ciyaartoydeeduba ay diirada saari doonaan sida ay kaga aargoosan lahaayeen Manchester City kulanka Axada ee finalka Carabao cup, kadib guuldaradii 6-0 ay kala soo laabteen Etihad Stadium.
“Guushii Chelsea ee 6-0 ahayd, waxay ahayd wakhti aan aad ugu farxay, balse maanta waxaan rajeenayaa inaysan nagu garaacin 6-0, sababtoo ah ciyaartoydooda iyo macalinkooda waxay diirada saari doona inay naga guuleystaan”.
“Leroy Sané waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican booskiisa aduunka, waxaan jeclaan lahaa inaan u isticmaalo halka uu halis ku yahay”.
“Waa ciyaaryahan cajiib ah, ma dhihi karo kama ciyaari karo khadka dhexe, laakiin xilligan xaadirka ah waxaan heysanaa ciyaaryahano aad u fiican ee qaban kara shaqadan”.
Shaxda rasmiga ah kulanka horyaalka La Liga ee kooxaha Sevilla Vs Barcelona
Madaxweynaha PSG oo ka hadlay mustaqbalka xidigaha Mbappé iyo Neymar Jr